घरेलु उपचार गमाहरूको पीडाको लागि: यी घरेलू उपचार gingivitis र दाँत दुख्नेबाट राहत पाउन प्रभावकारी छन्!
स्वास्थ्य घरेलु उपचार गमाहरूको पीडाको लागि: यी घरेलू उपचार gingivitis र दाँत दुख्नेबाट राहत पाउन प्रभावकारी छन्!
Nepal Online Patrika: दाँत दुख्ने घरेलु उपचार: दाँत दुख्ने सबैभन्दा असह्य दुखाई हो। धेरै मानिसहरू दाँत र मसूड़ों को दुखाई द्वारा चिन्तित छन्। दाँत दुख्ने कारणहरू फरक हुन सक्छ। तपाईसँग हरेक समस्याको लागि उपचार हुन सक्छ, तर धेरै कम मानिसहरूलाई दाँत दुख्ने घरेलु उपचार र गममा सूजन र दुखाइको उपचारको बारेमा थाहा छ।
गम दुखाइबाट कसरी राहत पाउने: दाँत दुख्ने सबैभन्दा असह्य दुखाई हो। धेरै मानिसहरू दाँत र मसूड़ों को दुखाई द्वारा चिन्तित छन्। दाँत दुख्ने कारणहरू फरक हुन सक्छ। तपाईसँग हरेक समस्याको लागि उपचार हुन सक्छ, तर दाँत दुख्ने घरेलु उपचार र गममा सूजन र दुखाइ हटाउने उपायहरूको बारेमा धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ। मसलाको पीडाबाट राहत पाउन गमबाट पीडा कम गर्ने उपायहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यदि उपचार नगरिएमा यो तपाईंको शरीरमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। दाँत वा मसलाको दुखाईले केही पनि खाँदैन। गममा सूजन वा दुखाइबाट राहत पाउने धेरै तरिकाहरू छन्, तर यदि तपाईंलाई अचानक दांत दुख्ने समस्या छ र तपाईंसँग कुनै औषधि छैन भने, केही सजिलो घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यस समस्याबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ।
१. हींग फाइदाजनक छ:
हिंग मौखिक स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ। हींग मात्र पेटको लागि लाभदायक मानिदैन, तर मौखिक स्वास्थ्यको लागि यो अद्भुत छ। हिंग धेरै खानाहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ अनुहारसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरूबाट राहत पाउन। हिंग दाँत सम्बन्धी समस्याहरू हटाउनका लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ। थप रूपमा, हींगले पनि सिपी कीरामा हुने सूजनलाई कम गर्न सक्छ। यसको लागि तपाईले हींग चबाउन सक्नुहुन्छ।
२. हींग कुल्ला:
यदि तपाईंलाई दाँत वा मसलाको समस्या छ भने, त्यसपछि तपाईंले हींगको पानी दैनिक धुनु सक्नुहुनेछ। एक कप पानीमा २ देखि pin चुच्चो हींग थप्नुहोस् र उही मात्रामा चट्टान नुन थपेर पानी उमाल्नुहोस्। जब यो पानी धेरै न्यानो रहन्छ तब यस पानीले कुल्नुहोस्। तपाईं यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
3. लौंग पनि प्रभावकारी छ:
लौकाहरू कहिलेकाँहि मुखको दुर्गन्ध हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यदि हल्का दाँतको दुखाइ छ वा दाँत खुम्चिँदैछ भने, त्यसपछि त्यो दाँतको भित्र एउटा लौंग राख्नुहोस्। यस समयमा, यदि तपाईं पानी पिउन चाहानुहुन्छ, त्यसपछि न्यानो पानी प्रयोग गर्नुहोस्। लौंगमा जीवाणुरोधी, एन्टिन्फ्लेमेटरी गुणहरू छन्। यसले दाँतको किरालाई मार्दछ। यदि तपाईंलाई मसूडा वा दाँत दुखाइ छ भने, खट्टा चीजहरू त्याग्नुहोस् र तपाईं लौंग चबाएर सहयोग लिन सक्नुहुन्छ।
4. लसुन प्रयोग गर्नुहोस्:
लसुनसँग धेरै एन्टि-ब्याक्टेरियल गुणहरू छन् जुन दाँत र मसलाको स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ। लसुन दाँतको दुखाई बाट तपाईं राहत दिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि, दुई लसुन लौंग पील। तिनीहरूलाई दाँतमा राख्नुहोस् जहाँ पीडा हुन्छ र हल्कासँग चर्नुहोस्। यो तपाईको मसूड़ों को जलनको लागि पनि लाभदायक हुन सक्छ।